"Waxaan ogaaday in walaashey iga weyn ay ahayd hooyadeey" | Radio Hormuud
"Waxaan ogaaday in walaashey iga weyn ay ahayd hooyadeey"
Albert Gilmour, isagoo 21 jir ah, sannadkii 1965-tii, ayuu helay sir ay qoyskiisa leeyihiin oo ku saabsan dhalashadiisa saxda ah, wuxuuna markii ugu horreysay BBC-da uga sheekeynayaa qisadiisa qalbiyada badan taabatay.
Mr Gilmour aabihiis wuxuu ka mid ahaa ciidamo Mareykan ah oo ay tiradoodu tahay 300,000 oo askari, kuwaas oo la geeyay Waqooyiga Ireland, xilligii uu socday Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Albert waalidiintiisu waxay kala lumeen markii aabihiis, oo isaga xitaa loogu magac daray, lagu daray askartii xeebaha Normandy la geeyay.
"Waxaan ogaaday in walaashey iga weyn ay ahayd hooyadeey. Waxay ahayd run aad u kharaar oo aan ku khasbanaa inaan aqbalo. Haddii aad ku dhalatid guur la'aan, waxay la mid tahay inaad tahay sidii qof aan jirin", ayuu yiri Albert.
Ruby waxay ahayd 17 sano jir markii ay la kulantay nin dhallinyar oo askeri ahaa oo ku sugnaa xero ciidan oo ku taallay Deegaanka Eglinton. Waxayna kala lumeen markii si sir ah ninkaas loogu qaaday saldhig kale oo ciidan.
Markii ay dhashay wiilkeeda, waxay u bixisay magacii aabihii eee Alberto, waxayna u korisay sida in ay walaashii tahay, maadaama ay aaminsanayd in uu dagaal ku dhintay.
"Mar kasta waxaan niyada ku heyn jiray, oo aan rabi jiray inaan ogaado qofka uu ahaa aabahay iyo sida uu u ekaa muuqaal ahaan. Muraayadda ayaan hor istaagi jiray wajigeyga ayaana eegi jiray, anigoo kasoo qaadaya sidii inuu i hor taagan yahay oo kale", ayuu yiri.
Qoys saddex bilood ku xayiran garoonka diyaaradaha Bangkok
Karen Cook, oo marxaladdaas sharraxeysa ayaa tiri: "Hadiyaddii ugu fiicneyd ee aan siin karay aabahay waxay ahayd inaan la kulansiiyay dadkii ka haray qaraabadiisa, kuwaasoo mar walba ahaa qeyb ka mid ah dhiiggiisa, ahaana qoyskiisa Mareykanka".
Hase yeeshee wuxuu go'aansaday inuu u safro gobolka Maine, si uu u arko xubnaha kale ee wali ka nool reer aabihiis.
"Markii aan aaday Mareykanka, isla markii aan diyaaradda ka dagayba waxaan dareemay inaan gurigeyga joogo. Waxaan lasoo hadlay hooyadeey, Ruby Gilmour, waxaana doonayay inaan ogaado in markii aan kasoo noqdo Mareykanka aan heysto sawir uu leeyahay aabahay, midkii aan soo helayna wuxuu ahaa isagoo dharka ciidanka ku labisan. Hooyadey ayaan tusay si ay mar kale u aragto wajigiisa, aad bayna u oysay. Sawirkii ayey qaadatay waxayna boorsadeeda gacanta ku xafideysay illaa maalintii ay dhimatay".
Lamaanahan ayaa ku kala lumay dagaalkii labaad ee adduunka
"Hooyadey waxay ii sheegtay inuu aad u qalbi jabsanaa markii uu ka tagayay, iyaduna sidoo kale way qalbi jabsaneyd, ka dibna ma aysan ogeyn inuu dhintay oo la dilay ama inuu nool yahay toona, mana aysan garaneynin waxa uu dib ula soo xiriiri waayay. Markii aan sawirkiisa u keenay, una sheegay inuu dhintay, waxay iga qabatay gacanta waxayna igu tiri; 'iga raalli noqo', anigana waxaan ku iri: 'looma baahna inaad I raalli galisid', waxyaabaha noocan ah way dhacaan".
Albert wuaxay da'diisu noqoneysaa 75 sano, marka la gaaro bisha November.